Toriteny alahady 15 Mars 2009 : Miangona eny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra – FJKM Ambavahadimitafo Toriteny alahady 15 Mars 2009 : Miangona eny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra |
Toriteny alahady 15 Mars 2009 : Miangona eny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra
Ny bokin’i Zefania no akàna ny toriteny. Ny hoe : Zefania moa dia midika hoe : manafina Andriamanitra na miaro Andriamanitra.
Ity mpaminany Zefania ity dia nifanindran-dàlana tamin’i Josia mpanjakan’i Joda. Ary Josia mpanjaka dia nanana politika hanitsy ny fivavahana teo amin’ny firenena Joda. Ary raha mbola tsy nanomboka akory izany fanitsiam-pivavahana lehibe izany, dia efa tonga tamin’i Zefania izao faminaniaina izao.
Raha ny perikopa manoloana antsika dia ahatarafana ny loha-hevitra hoe :
« IZAY ANTOM-PIANTOHAN’ANDRIAMANITRA »
Ahoana ary no atao mba ahafahana mahazo antoka fa miaro Andriamanitra ?
Inona no takiana amin’ny mpanompon’Andriamanitra mba hiarovan’Andriamanitra azy?
1. Ny fandinihan-tena : Zefania 2 :And 1 : « Miangona eny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra »
Dikan-teny hafa : « Mandiniha tena ka mieritrereta ry vahoaka lany henatra ».
Antso ho amin’ny fandinihan-tena, antso ho amin’ny fieritreretana lalina.
Izany hoe dinihina fatratra ny fiainana manontolo, averina eritreretina lalina izay natao rehetra sy izay niainana tamin’ny fiainana manontolo. Satria vahoaka lany henatra, vahoaka tsy mahalala henatra intsony noho ny fahajambam-panahy lalina nahazo azy.
Ireto vahoaka ireto dia vahoaka nanota, sy nivadika tamin’Andriamanitra. Satria nanjaka tamin’izany fotoana izany ny fampirafesam-pivavahana. Ary tamin’izany no nampirafesan’ny vahoaka an’Andriamanitra tamin’andriamanitra hafa izay heveriny fa mahavonjy.
Izao no voalaza ao amin’ny Zefania 1 and 5 : « …ary izay mianiana ho an’i Jehovah, sady nianiana amin’i Malkama ». Ny hoe Malkama dia midika hoe : mpanjakany. Izany hoe nampitoviana lenta Andriamanitra sy ny mpanjakan’ireto vahoaka ireto. Ary izany toe-javatra izany dia maharikoriko an’Andriamanitra ary mampalahelo Azy. Ary an’isan’izay andraran’Andriamanitra ao amin’ny didy folo ny hoe : « Aza manana Andriamani-kafa afa tsy Izaho ihany ».
Jamba ireto vahoaka ireto. Toy ny olona adala izy, jereo ny olona adala, tsy misaina intsony, tsy afaka mieritreritra intsony, tsy afaka mandinika intsony ny amin’izay mety sy tsy mety eo amin’ny fiainana.
Koa manoloana izany adalàna izany dia taomina ireto vahoaka ireto handinika, hieritreritra mba hahafahany mahalala ny fahadisoany ary hahafantarany ny zavatra tsy mety ataony.
Ry Havana malala, fotoana fandinihan-tena izao, mialoha ny hahatsiarovana ny nahafatesan’i Tompo, mialoha ny hahatsiarovana ny nandreseny ny fahafatesana. Amin’izao andro izao dia hazakazaka ny fiainana. Vonjena ny ao an-trano, vonjena ny asa aman-draharaha, vonjena ny adidy eo amin’ny fiaraha-monina. Toa tsy manana fotoana handinihan-tena intsony ny olona.
Ary ny fiangonana aza dia toa lasa zary fahazarana.
Noho izany indrindra ry Havana, dia tarihin’Andriamanitra isika mba handinin-tena, hieritreritra. Manao ahoana tokoa moa ilay fifandraisantsika amin’Andriamanitra? Manao ahoana ilay fanompoantsika an’Andriamanitra? Manao ahoana ilay fifaneraserantsika amin’Andriamanitra?
Araka izay dia ilaina ny mandinin-tena mandrakariva.
Hoy ny Salamo : « Diniho ny tenanareo na mitoetra amin’ny finoana na tsia… »
2. Ny fibebahana : Zefania 2 and 3 : mitadiava an’i Jehovah
Matoateny mandidy no ampiasaina eto. Izany dia mitaky asa avy hatrany, mitaky valiny izao ankehitriny izao.
Araka izay dia taomina ireto vahoaka ireto hitady an’Andriamanitra.
Izany hoe : hiverina amin’i Jehovah, hitodika Aminy, hiazakazaka. Ary izay ilay endriky ny fibebahana, fiverenana indray amin’Andriamanitra.
Satria ireto vahoaka ireto dia efa tao Aminy ihany saingy nivadika. Hitantsika ao amin’ny and faha 3 ohatra ny hoe : « izay efa nanaraka ny fitsipiny »: Izany hoe efa nanao ny sitrapon’Andriamanitra ihany saingy tamin’ny fotoana efa lasa.
Koa taomina ary ireto vahoaka ireto hiverina amin’Andriamanitra ary hibebaka. Ary izany fibebahana izany dia tsy mijanona amin’ny fiovana ao anaty, fa aseho ihany koa amin’ny endrika ivelany.
Araka ny andininy manaraka : « Tadiavo ny fahamarinana, Tadiavo ny fandeferana. »
Ahoana moa no ahafantarana fa manao ny marina ny olona? Ahoana no ahafantarana fa mandefitra ny olona?
Ny asa atao, ny fihetsika etsy ivelany no andrefesana izany. Araka izany dia endriky ny fibebahana ny fanehoana ny fahamarinana sy fahaizana mandefitra manoloana ny zavatra samihafa. Tsy misy intsony mantsy ny fahamarinana, tsy misy intsony ny fandeferana fa dia samy manao izay tratriny ireto vahoaka ireto.
Ary izany no itaomana azy ireo hiverina amin’Andriamanitra, hibebaka tanteraka, ary tsy ao anatiny ihany fa ny toetra ety ivelany dia atao sahaza izany fibebahana izany.
Ry Havana malala, tsara ny mitonona anarana hoe kristiana. Ka ao anatin’izany dia sainina foana ny hoe : manana ny fiainana mandrakizay, na ihany koa efa voavonjy. Tsara izany saingy toa adino ilay fibebahana, fiverenana amin’Andriamanitra.
Mahalasa saina ny zava-misy iainana ankehitriny. Raha mitodika ny amin’ny lasa isika : kitapo latsaka tsy misy maka.
Fa inona no miseho ankehitriny? Fananan’olona robaina ary dorana? Ary eo koa ny fanambakàna samihafa izay ataon’ny olona, ny tsindrio fa lavo, ny varomaizina samihafa mameno ny tanàna, ary ny mahagaga dia mipàka aty amin’ny fiangonana ireny zavatra ireny. Satria ny kristiana isan’izay manana ny maha-izy azy amin’ny sehatra rehetra. Izany ve ny vokatry ny filazantsara? Anjarantsika ny mieritreritra.
Koa andeha isika hiverina amin’Andriamanitra, andeha isika hanavao ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra. Enga anie ny fiainantsika manontolo no ,hahatsapàna fa mibebaka marina.
Ho fehiny dia izao : tsy afa-misaraka ny fandinihan-tena sy ny fibebahana. Olona mandinin-tena no afaka mibebaka. Atao ahoana moa ny hibebaka raha izay tsy nety natao no tsy fantatra akory?
Hamaranana azy dia izao, maro ireo karazam-piantohana misy eto amin’ny firenena. Tamin’ireny fandrobana sy fandorana tranombarotra samihafa ireny dia miala tsy hiantoka ireo karazam-piantohana. Fa ny ao amin’Andriamanitra kosa dia tsy mba mitovy amin’izany, fa voahajantsika ilay fifanarahana, dia ny fandinihan-tena marina sy fibebahana marina, dia ho tsara antoka ny fiainantsika, ho avotra isika manoloana izay mety hiseho rehetra.
Hoy ny andininy farany hoe : « Angamba ho voafina ianareo amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah ».
Koa raha tonga ilay fahatezeran’Andriamanitra dia mba ho isan’izany voaaro isika.
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra, Amen.
Mpitandrina mizadraharaha eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo.